ग्वाटेमाला भन्सार | यात्रा समाचार
मारिएला क्यारिल | | संस्कृति, ग्वाटेमाला
अमेरिका संस्कृति र इतिहासमा धनी महाद्वीप हो र केन्द्रीय अंशको म्यान विरासत छ जुन मेक्सिकोमा सीमित छैन, जस्तो कि केही अनुपस्थित दिमागले सोच्न सक्छ। यहाँ मध्य अमेरिका मा छ ग्वाटेमाला र आज हामी यसको बारेमा कुरा गर्नेछौं तिनीहरूको चलन.
यदि तपाईंले नक्शामा हेर्नुभयो भने तपाईंले देख्न सक्नुहुनेछ कि देश सानो छ, तर सत्य यो हो कि यसको कडा भूगोलले धेरै फरक-फरक मौसम र परिदृश्य ल्याउँदछ। जसरी वर्षा वनहरू छन् त्यहाँ मैंग्रोभहरू पनि छन् र जस्तो कि त्यहाँ छ शक्तिशाली हिस्पैनिक सम्पदा el म्यान विरासत यो पनि उपस्थित भन्छन्।
2 ग्वाटेमाला भन्सार
औपनिवेशिक समयमा, ग्वाटेमेला क्षेत्र यो नयाँ स्पेनको विकरयल्टीको एक हिस्सा थियो तर यो मालिकको स्वामित्वमा हुनु अघि मायन र ओल्मेक्स। १ Gu२१ मा स्वतन्त्रता आयो, जब यो ग्वाटेमालाको राज्य भयो र पछि पहिलो मेक्सिकन साम्राज्य र मध्य अमेरिकाको संघीय गणराज्यको हिस्सा भयो, अन्त सम्म १ 1874 मा वर्तमान गणतन्त्रको जन्म भएको थियो।
अमेरिकाको यस भागको राजनीतिक जीवन द्वारा अस्थिरता, तानाशाही र गृह युद्धहरू। यहाँ सबै कुरा १ 1996 XNUMX in मा अन्त्य भयो र त्यसबेलादेखि सबै चीजहरू शान्त छन्, यद्यपि यसको मतलब गरीबी र असमानतालाई पछाडि छोडियो भन्ने छैन।
हामीले माथि भनेझैं एक फरक भूगोल छ। यससँग धेरै हिमालहरू छन्, प्रशान्त महासागर र समुद्री किनारहरू छन् त्यसैले एक राम्रो आनन्द लिनुहोस् जैविक विविधता त्यो अचम्मको साथ हात मा जान्छ सांस्कृतिक विविधता। त्यहाँ धेरै भाषाहरू छन् २० भन्दा बढी भाषिक समूहहरू वास्तवमा, करीव १,,15 thousand हजार मानिसहरु को कुल संख्या मा।
त्यहाँ सेतो छन्, त्यहाँ कालोहरू छन्, धेरै कम एशियाईहरू, आदिवासीहरू र धेरै मेसिटिजहरू, यी दुई लगभग समान अनुपातमा।
त्यहाँ धेरै भाषाहरू समूह छन् प्रत्येकको आ-आफ्नै प्रतीकहरू, शैलीहरू र रंगहरूका साथ आफ्नै विशिष्ट पोशाक हुन्छ यद्यपि सामान्य पहेंलो, गुलाबी, रातो र निलो अवस्थित छन्। लुगाहरू वास्तवमै यहाँ चम्किन्छन् र नायकहरू हुन्।
उदाहरण को लागी, अल्टोस कुचुमातानेसको पहाडहरुमा नेबाज शहरकी महिलाले रातो स्कर्टमा पहेंलो ब्यान्ड सहितको पोशाक लगाउँछिन्, जसलाई शाश र पारम्परिक स्क्वायर ब्लाउज भनिन्छ। हुइपिल। त्यो मानिस पाम टोपी र प्यान्टको साथ खुला जैकेट लगाउँछ।
त्यहाँ अन्य क्षेत्रहरू छन्, उदाहरणका लागि मायन मूलको स्यान्टियागो सहरमा, जहाँ महिलाको हिपिल बैजनी र फूलहरू र जनावरहरूको कढ़ाईको साथ छ। सत्य यो हो अधिक तपाई ग्वाटेमाला को माध्यम बाट यात्रा, अधिक विविधता तपाईं परम्परागत लुगा मा पाउन सक्नुहुन्छ। ती सबै तपाइँलाई सुन्दर हुनेछन्।
तर ग्वाटेमेलानहरु कसरी छन्? खैर यो भनिन्छ कि तिनीहरू धेरै परम्परागत छन् र यो एक आधुनिक देश भएता पनि पूर्व-हिस्पैनिक र हिस्पैनिक परम्पराहरू अझै धेरै अवस्थित छन्। उदाहरण को लागी, धार्मिक चाडपर्व एक राम्रो उदाहरण हो। यो सम्झना को मामला मा छ सन्तहरू र पवित्र आत्माहरूको दिनहरू नोभेम्बर १ र २ बीच, प्री-हिस्पैनिक मूलको साथ उत्सव, जसको मूल मिति याद छैन।
ग्वाटेमालान्सले जहिले पनि इसाईकरणको धेरै समय अघि मरेकाहरूलाई सम्मान गरेका थिए र वास्तवमा यो उपनिवेशहरूले नै यी उत्सवहरू लिए र आदिवासीहरूलाई उनीहरूको स्थानमा आकर्षित गर्न आफ्नै बनाए। ती मितिहरूको लागि परिवारहरू चिहान नजिक जान्छन् र खानेकुरा र पेय पदार्थ छोडछन् कस्टम भनिन्छ टाउकोa.
यो प्रथा पुरानो हो र खानाको विस्तार भनिन्छ कडा जुन बढी स्पेनिश हो।
स्पेनिशहरूले गाईवस्तु र फार्मका पशुहरू ल्याए र आदिवासीहरूले सबै चीज छाँटकाँट गरे। प्रसिद्ध चिसो मासु ingredients० सामग्रीमा पुग्छ र चिसो सलाद जस्तै देखिन्छ। स्पेनिशहरूले पनि चिहानमा फूल ल्याउने प्रथा अपनाए र हालसालै, सबै जीवित संस्कृति जस्तै, मारियाचीहरू चिहानहरूमा देखा पर्‍यो र अक्टूबरमा अयोग्य हेलोवीन।
यदि शताब्दीयौं पहिले राजनीतिक प्रभुत्वले आफ्नो चलनहरू ल्यायो भने, आज सांस्कृतिक र आर्थिक प्रभुत्व आउँछ।
अर्को धेरै मनाइएको क्याथोलिक छुट्टी हो ईस्टर हप्ता। यो विशेष गरी एन्टिगामा ठूलो जोरका साथ मनाइएको छ जहाँ लामो जुलूसहरू र सुन्दर कार्पेटहरू छन् भनिन्छ आर्मिल रगहरू, रंगीन र फल र फूलहरू डिजाइनको साथ, जुन जुलूसका मानिसहरूले बैजनी र लुगा लगाउँदछन्। क्रिसमसको आगमन हुनु अघि त्यहाँ परम्परागत चाडपर्व छ कि त्यहाँ एक शुद्धिकरण अनुष्ठानको छवि छ: मानिसहरूले सबै पुरानो कबाड भेला गर्छन् र डिसेम्बर on मा उसको घरको अगाडि यसलाई जलाउँछन्।
यो पार्टी भनिन्छ जलिरहेको शैतान.
र त्यसपछि हो, क्रिसमसको चर्चमा अधिक जुलूस, आतिशबाजी र जन्म दृश्यहरू सहित। डिसेम्बर २ the छ को उत्सव inns जसमा २ 24 औं साँझमा भर्जिन मेरी र बाल येशू र बच्चाहरूको टम्बोरिन, कास्टनेट र मोमबत्ती वा लालटेनका साथ गोठालोको पोशाकमा चित्रण गरिएको जुलुसहरू छन्। तिनीहरू हिंड्ने क्रममा तिनीहरू क्रिस्मस क्यारोल र दोहोराहरू गाउँछन् र केही मिठो रोटी वा तामेलको साथ उनीहरू मध्यरात सम्म रहन्छन्।
una क्रिश्चियनलाई प्रि-हिस्पैनिकको साथ जोड्ने चाड़ भनेको एस्क्विपुलसको ब्ल्याक क्राइष्टको चाड़ हो। यो अल साल्भाडोर, होन्डुरस र ग्वाटेमाला द्वारा साझा परम्परा हो र जुन एक चुआ वा एक बालाम चुआका काला देवताहरूसँग सम्बन्धित छ। यो वास्तवमा जनवरीमा ट्रिपल सीमानामा चिकुइमुलामा हुन्छ।
अन्य रीतिथितिहरू, अब क्रिश्चियनसँग सम्बन्धित छैनन् रिबन दौड वा रूस्टरहरूको खेल, जसमा संतहरू र मातृ पृथ्वीको लागि अनुमति अनुरोध गरिएको छ र सवारहरूले रंगीन पोशाक, स्कार्फ, प्वाँख र रिबन लगाउँछन्।
अन्तमा, यदि हामीले धार्मिक चाडहरूलाई अलग राख्यौं भने हामी यसमा सामेल हुन सक्छौं अधिक सामाजिक उत्सवहरु। हामी सबै हाम्रो मनाउँछौं जन्मदिन र यहाँ ग्वाटेमालामा तपाईं सामान्यतया बिहान5बजे रॉकेटहरू जलाउनुहुन्छ र बिहानको खाजामा चकलेट र फ्रान्सेली रोटीको साथ तामाल खानुहुन्छ। बच्चाहरूको लागि, पार्टी याद गर्न मिल्दैन। र जब यो विवाहको कुरा आउँदछ, सामान्य कुरा, कम्तिमा धेरै परम्परागत परिवारहरूमा, दुलहाले ससुरालालाई आफ्नो प्रेमिकाको हातको लागि सोध्छन् र त्यहाँ छुट्टै स्नातक पार्टी छ, एउटा उनको लागि र एउटा उनको लागि।
सत्य यो हो कि अमेरिकी देशहरू जसको स्पेनको अधिक उपस्थिति छ, उनीहरूको धनसम्पत्तिले र ताजका ढुकुटीहरू भरिएको महत्त्वपूर्ण विकृति कलाका लागि, आज थुप्रै धार्मिक र सामाजिक रीतिथितिहरू सुरक्षित छन् जुन अन्य देशहरूमा भइसकेका छन्। वा धेरै बढी आराम पाएका छन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » अमेरिका » ग्वाटेमाला » ग्वाटेमाला भन्सार